သဘာဝ သက်သက်မျှသာ – | ZAYYA
မိုး မြေ ကြားက နှလုံးသား တစ်စုံ →
ဘာဝနာ ဟာ အဲ့ဒီ စိတ်ကူး အတွေးအကြံတွေကို သတ်ပစ်တယ်။ အဲ့ဒီ စိတ်အတွေးတွေကို ချန်ထားရစ်ပြီး သူတို့ကို ကျော်လွန်သွားတယ်။ သိမှု သက်သက်ဆီကိုသာ ဦးတည်သွားတယ်။
ပုံမှန် လှုပ်ရှားနေတဲ့ ဘဝမှာ – ခင်ဗျားရဲ့ စိတ်ဟာ အခြားအရာတွေ အားလုံး ထည့်သွင်း စဉ်းစားနိုင်ရင် တောင် ဘာဝနာကို လက်မခံနိုင်ဘူး ၊ ဘေးဖယ်ထားရစ်တယ်။ အကြောင်းက ဘာဝနာဟာ ခင်ဗျားရဲ့ ပင်ကိုယ် သဘာဝ ဖြစ်နေလို့၊ အတွေးအကြံ မဟုတ်တဲ့ သိမှု သက်သက် ဖြစ်နေလို့ ပါ။
ဒါ့ကြောင့် – ဘာဝနာဟာ စိတ်ကူး အတွေးအကြံရဲ့ အဆင့်ဆင့် တက်လှမ်းသွားတဲ့ လှေကား ထစ် ၊ အဆင့် – မဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျား လှေကားထစ် တစ်ခုခုကို နင်းချလိုက်ရင် – ခင်ဗျား နင်းချလိုက်တဲ့ အဲ့အဖြစ်ကို သိမြင်ရုံလေး။- ဘယ်လှေကားထစ်ကို မဆို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိမြင် ထားခြင်းမျှ သက်သက် ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီ မြင်သိမှုနဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ ခဏတိုင်း ခဏတိုင်းကို ရှင်သန်နေတဲ့ ဖြစ်စဉ်သာ ဘာဝနာ ပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဘာဝနာဟာ ခင်ဗျားရဲ့ မူရင်း အဖြူထည်သား သဘာဝ သာ ဖြစ်တယ် – သီးခြား လုပ်ယူနေရတဲ့ အရာ တစ်ခု မဟုတ်ဘူး – ခင်ဗျား ရှာကြံရယူနေရမယ့် ဂုဏ်ရည်တစ်ခု မဟုတ်ဘူး-
It is you. It is your being.
ဘာဝနာ ဟာ ခင်ဗျား စင်စစ် ကိုယ်တိုင်၊
ခင်ဗျား ရဲ့ ဖြစ်တည်ချက်သက်သက်မျှသာ ဖြစ်တယ် လို့ အထပ်ထပ် ညွှန်းဆို လိုပါတယ်။